Vawleicung Minthang Pathian Zeirel lo in BiaaChim Mi Pawl An Tonmi Thil le An Sining Hi Rel ve Hmanh. Zeitluk Indah Tih Anun – Onlinenungak
Vawleicung Minthang Pathian Zeirel lo in BiaaChim Mi Pawl An Tonmi Thil le An Sining Hi Rel ve Hmanh. Zeitluk Indah Tih Anun
(1)John Lennon (Beatles)
အဆိုတော်Johnက ငါတို့ရဲ့ bandဟာ ယေရှုထက်တောင် နာမည်ပိုကြီးတယ်လို့ (1966)နှစ်မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူ့ရဲ့အမာခံပရိတ်သတ် Mark Chapman ရဲ့သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခြင်းကို ခံပြီး အစိမ်းသေ သေသွားရတယ်။
(2)Titanic သင်္ဘောကို တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Thomas Andrew က “ဒီသဘောင်္က အင်မတန် ကြီးမားပြီးခိုင်ခံ့တယ်။ ဘယ်သူမှ ဖျက်ဆီးလို့မရဘူး။
‘Not even God can sink it’ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ဆင်းနစ်ရင်တောင် မမြှပ်ဘူး” လို့ ကြုံးဝါးပြောဆိုခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ Titanic ရဲ့ ပထမဆုံး ခရီးစဉ်မှာပဲ သဘောင်္ကြီး နှစ်မြှပ်သွားပြီး လူပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီးကုန်တယ်။
(3)ဆရာကြီး Billy Graham က သူ့ရဲ့တရားပွဲကို လာဖို့ မင်းသမီး Marilyn ကို ဖိတ်ကြားခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါပေမဲ့ မင်းသမီးက”I don’t need your Jesus မင်းရဲ့ ယေရှုကို ငါအလိုမရှိဘူး”လို့ ခါးသီးစွာ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။
တစ်ပတ်အကြာမှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်အခန်းမှာ အသေဆိုးနဲ့ သေဆုံးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ တရားခံက ဘယ်သူလဲဆိုတာကို မဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။
(4)ဘရာဇီးလ်အဆိုတော် Cazuza က သူ့show တခုမှာ ဖျော်ဖြေနေတုန်း၊ သူသောက်နေတဲ့ ဆေးလိပ်ငွေ့ကို ကောင်းကင်မော့ကြည့်ပြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။”ရော့ ဘုရား၊ အဲဒါ ဘုရားအတွက်..သောက်လိုက်”ဆိုပြီး ရေရွတ်ပြောဆိုခဲ့တယ်။မကြာဘူး အသည်းကင်ဆာနဲ့ သေသွားခဲ့တယ်။
(5) Campinas ဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကားပေါ်မှာထိုင်နေတုန်း သူ့အမေက “ဘုရားနဲ့ သွားနော်၊ဘုရားသခင် ကွယ်ကာ မစပါစေ”ဆိုပြီး သမီးကို လှမ်းပြောခဲ့တယ်။
သူ့သမီးက “ဘုရား ကတော့ ကားနောက်ခန်း ပစ္စည်းထည့်တဲ့ နေရာမှာပဲ လိုက်ပါစေ။ဒီမှာတော့နေရာမရှိတော့ဘူး”ဆိုပြီး ပျက်ရယ်ပြု သရော်ခဲ့တယ်။ သူတို့ကား ထွက်ပြီး ၁ နာရီ လောက်အကြာမှာပဲ ကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီး အားလုံးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ ရဲအရာရှိတွေက “ထူးဆန်းလိုက်တာ ကားနောက်ခန်းမှာတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊ စားစရာကြက်ဥတလုံးတောင် မကွဲဘူး”ဆိုပြီး အံအားသင့်စွာ ပြောဆိုခဲ့တယ်။
(6) Christine Hewitt
(Jamica သတင်း စာနယ်ဇင်း တင်ဆက်သူ)
စာအုပ်တွေထဲမှာကျမ်းစာပါ နုတ်ကပတ်တော် က အဆိုးဆုံးပဲ Word of God was the worst book ever written ဆိုပြီး interview မှာ ပြောဆိုခဲ့တယ်။ မကြာခင်မှာပဲ သူ့ကားပေါ်မှာ မီးလောင်ကျွမ်းပြီး သေဆုံးနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
အလွှဲမယူကြနဲ့။ ဘုရားသခင်သည် မထီမဲ့မြင် ပြုခြင်းကို ခံတော်မမူ(ဂလာတိ ၆း၇)
ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းနောင်တရပြီး ဘုရားဆီပြန်တိုးဝင်ခဲ့တယ်။
စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ ဘုရားဆီတိုးဝင်လာတိုင်း ဘုရားရဲ့ သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို ပြန်လည်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။
ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ နောင်တရခြင်း👇
ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ဘုရားဘက်ပြန်လှည့်လာခြင်း 👇